Ọkachamara Ọkachamara Ọkụ Ọkụ China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ọkachamara Ọkachamara Ọkụ Ọkụ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 23 Ngwaahịa maka Ọkachamara Ọkachamara Ọkụ Ọkụ)
Nchịkọta Egwuregwu Ndị Na-eme Ka A Mara Mma Maka Ịgba Ọkụ
Nchịkọta Egwuregwu Ndị Na-eme Ka A Mara Mma Maka Ịgba Ọkụ Uru & Uru - Egwuregwu Egwuregwu Snow Snow na-agbapụ na eriri ntanetị ọkụ, na-eji ike eletrik emepụta ọkụ. - Ọ dịghị mkpa iji wụnye ihe ọkụkụ, nlọghachi, ma ọ bụ ịse nfuli, ihe niile ị chọrọ bụ ebe eletrik na onye na-achịkwa. - Ngwa ngwa ịza ma kpoo ọkụ, ebe...
Egwuregwu Na-agba Ọkụ Na-agba Egwuregwu Mgba Egwuregwu Na-agba Ọkụ
Windproof Winter Snowboard Guantes Na-ekpo Ekpu Snowboard Na-agba Egwuregwu Ndị Na-agba Egwuregwu Ndị Na-agba Egwuregwu Ndị Na-agba Egwuregwu Ndị Na-agba Egwuregwu Ndị Na-agba Egwuregwu Ụmụaka. Windstopper N'èzí Egwuregwu Gloves! Maka Ụmụ nwoke Ndị Nwanyi na Winter, Na-enwe Ọkụ Mgbe Ịgba Mmiri Na-agba Egwuregwu...
Nkọwapụta ngwaahịa Mkpuru osisi maka mma germination. Ọtụtụ mkpụrụ na-ahọrọ ala ọkụ maka mkpụrụ germination kacha mma. Mmiri ndị a dị mkpa, ndị na-adịghị mmiri na-eme ka mkpụrụ osisi germination na ebe ndị na-ekpo ọkụ dịkwuo nso. 20 ° F / 11 Celsius C n'elu ihere. Ejikwala ngwaahịa anyị iji kwadoro ụkpụrụ CE,...
Nnukwu Igwe Na-ekpo Ọkụ Infrared
Nkọwapụta ngwaahịa Ị na-ata anya na anya, na- acha ọbara ọbara ma ọ bụ na- agba agba? Nke a bụ ihe ngwọta! A na-eme ka mkpuchi ihu igwe ọkụ a dị ọkụ iji kpoo anya ma si otú ahụ belata anya anwụ. Anya ihu na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ bụ ihe mgbochi kpo oku a na-ekpo ọkụ maka ngwa ngwa nke ọgwụ ọkụ. Jiri maka ọgwụgwọ mgbe...
Ọkachamara Ọkachamara Ọkụ Ọkụ Ịgba Ọkụ Ọkụ Mkpụrụ Okpomọkụ Ọkụ Ọkụ Na-ere Ọkụ mmanụ Ihe Ntughari Ọkpụkpụ Ọhụrụ Mgbasa Mgbasa Ọgba Mgbasa Ọkụ maka Mgbapụta Ihe nkiri maka Ọkụ Ọkụ Egwurugwu Mkpụrụ Okpomọkụ Dị Mkpụrụ